pamusoro 3 Zvakanakisa Chitima Rwendo Nzvimbo Kubva London | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > pamusoro 3 Zvakanakisa Chitima Rwendo Nzvimbo Kubva London
KuUK. capital inotakura zvakawanda zvinofadza kune vafambi uye vagari venzvimbo zvakafanana. Kubva kuBig Ben neLondon Eye kuenda kuWestminster Abbey neBuckingham Palace – kune nzvimbo dzakawanda dzekushanyira muLondon. Ipapo kune zvakare yakajeka zvivakwa, zvakanaka husiku hupenyu, uye chikafu chinonaka. zvisinei, izvo vanhu vazhinji vanowanzo kanganwa ndezvekuti London zvakare ibwe rekukanda kure nekufamba kwakawanda chitima rwendo nzvimbo muU.K. uye Europe.
Kunyangwe iwe uchida kutiza mamiriro ekunze asina kujeka eLondon uye kunyura zuva kana kunyura mukusangana nenhoroondo, iwe uchawana nzvimbo dzakawanda dzakatenderedza London. Chinhu chakanakisa ndechekuti haufanirwe kurwisa mitsetse yakareba yekutarisa kuairport. pachinzvimbo, unogona kungotora kwauri kuenda uye kusvetukira muchitima kubva kune imwe yezviteshi zvakawanda muLondon. Heano 3 Best Chitima Rwendo nzvimbo kubva London.
Iyo Mashiripiti Inofadza Yechitima Inotasva
Kunyangwe iwe uri kushanyira London kwemazuva mashoma kana kuti wakagara muguta kwenguva yakareba sezvaungarangarira, kutora a chitima tasva inogona kuchinja maonero ako pamusoro peguta. Beyond the urban metropolis embodiment, London yakakomberedzwa nevazhinji ve misha inoyevedza, maguta emakoreji, mahombekombe, uye maguta nenhoroondo.
Nzvimbo dzese idzi dzinowanikwa nyore nechitima kubva kuLondon, uye hazvitore iwe anopfuura maawa mashoma kuti usvike. Chitima kukwira kubva kuLondon ndechimwe chezvinhu quintessential Chirungu zvakaitika iwe uchazombopupura.
Asi chikamu chakanaka pamusoro pezvitima izvi nzendo kubva kuLondon haisi iyo nzvimbo. Rwendo rurefu rweawa runokupa kupenya kwemaruwa ekuEurope akazadzwa nemarustic castles, zvitubu zvemvura yakachena, nezvikomo.
saka, pasina imwe ado, ngatitarisei zvatinosarudza zvekwakanakisa rwendo rwechitima kubva kuLondon.
1. Zvakanakisa Chitima Rwendo Nzvimbo Kubva London: Brighton
Kana iwe uri kufunga nezve kutora rwendo rwechitima kubva kuLondon, Brighton ingangove nzvimbo yekutanga ichauya mupfungwa dzako. Inosanganisira pristine pebble beach, hip cafes, plussh restaurants, uye migwagwa yakamanikana inomonereka, Brighton inopa zororo rekugamuchira kubva kumhirizhonga yehupenyu hwemudhorobha.
Uyezve, iyo idyllic yegungwa dhorobha kumusha kune inoshamisa Royal Pavilion, muzinda wemakore mazana maviri waimbova zororo rechirimo reMuchinda weWales. Inonyanya kuzivikanwa se "Gay Capital yeU.K", Brighton iri zvakare kumusha kune inoshamisa ruzhinji rwemabhawa-ane hushamwari uye inoshamisa yegore gay kudada mutambo..
Mushure mekunyorovesa kudziya kwezuva mwaranzi, kufamba uchidzika nemigwagwa yeBrighton inoyevedza kunoita kuti uwane rumwe rutivi rweguta. Nzira dzakatetepa dzakatenderedzwa nezvitoro zvezviyeuchidzo zvekare, vinyl rekodhi zvitoro, uye magaraji emifananidzo anokwezva.
Usakanganwe kumira kuti uwane kapu yekofi pane imwe yemakofi anoyevedza ane migwagwa iyi. Kana kuti unogona kunakidzwa nepinti inozorodza pane rimwe ramapindu edoro. wo, ramba wakatarira kune zvimwe zvezvakanakisa zvipenyu zvipenyu zvezvivakwa zvezana ramakore rechi 16.
Zvimwe zvinokwezva muBrighton zvinosanganisira Preston Park Rockery, iro ndiro gadheni rakakura kwazvo redombo muU.K, pamwe chete neyakajeka Brighton Palace Pier. Zvakangofanana nekubata Solo vafambi sezvazvinoitirwa mhuri.
Kunyangwe iwe uri kutsvaga kukurumidza rwendo rwezuva kana kuzorora vhiki kupera kubva kuLondon, Brighton isarudzo yakanakisa. Usakanganwa kuverenga zvakawanda nezve zvinhu zvakanakisa zvekuita muBrighton, kuUK., kwekupera kwevhiki uchironga rwendo rwako.
Kusvika Brighton Nechitima
Chinhu chakanaka pamusoro peBrighton ndechekuti unogona kusvika kuguta kubva kuLondon munguva ingangoita awa. Zvitima zvekuBrighton zvinosimuka zvese 10 maminetsi kubva pazviteshi zvakasiyana, kusanganisira London Victoria station uye London St. Pancras chiteshi.
2. Zvakanakisa Chitima Rwendo Nzvimbo Kubva London: Stonehenge uye Salisbury
Nayo Ages nematende nedzimba dzeumambo, iyo U.K haina kushomeka kwezvinokwezva kune nhoroondo buffs. Asi kana iwe uchida ruzivo rwekutanga rwekuona mapeji ebhuku renhoroondo huve hupenyu, kushanya kuStonehenge kunofanirwa.
The colossal prehistoric stone structure, inotendwa kuti inopfuura 5,000 zera, inopfuurira kuvhiringidza vanyori venhau dzakaitika uye vanochera matongo zvakafanana. Vashanyi havagone kubatsira asi kushamisika kuti vavaki vakakwanisa sei kudhonza matombo makuru aya kuenda kunzvimbo dzavari..
Situated less than 10 mamaira kubva kuSalisbury, Stonehenge chitima chemaminitsi makumi mapfumbamwe kubva kuU.K. guta. Iwe uchawana akawanda mabhazi uye matekisi paSalisbury chiteshi anoenda newe kune prehistoric saiti.
Uripo, usakanganwa kuongorora zvimwe zvinokwezva izvo dunhu rinofanira kupa. Izvi zvinosanganisira stellar timbered denderedzwa reWoodhenge uye zvakasara zveasinganzwisisike Durrington Walls..
wo, ipfungwa yakanaka kupedza nguva mudhorobha renhoroondo reSalisbury. Enda kuSalisbury Cathedral yezana ramakore rechi 13 uye famba uchidzika neKathedral Close kuti utarise Elizabethan naVictorian. mapurani zvinoshamisa. Usaite zvekutengesa zvekuwedzera paMarket Square usati wagadzirisa pint yedoro pane imwe quaint cafe..
Kusvika Stonehenge Nechitima
Tora chitima kuenda kuSalisbury kubva kuLondon Waterloo chiteshi. Kana wangosvika kuSalisbury chiteshi, svetukira mutekisi kana bhazi kuti usvike Stonehenge. Ita shuwa kuti iwe unoverengera yako Stonehenge tour pamberi.
3. Zvakanakisa Chitima Rwendo Nzvimbo Kubva London: Cotswolds
Iwe unoziva nzvimbo yakakodzera kushanyirwa kana yave yakasarudzwa se "Nzvimbo Yekunaka Kwakasarudzika Runako". Nezvikomo zvayo zvakasvibira, magadheni emaruva akagadzirwa, huchi-matombo cottages, uye dzimba dzakanaka, Cotswolds mufananidzo wekupfira wemhando yeChirungu yekumaruwa iwe waungave wakaona mumabhaisikopo.
Cotswolds ndiyo imwe yenzvimbo idzo dzausingade kuita zvakawanda kuti uwane zororo kubva kuLondon.. Zvakakurumbira zvinokwezva munharaunda zvinosanganisira Broadway Tower, Burton-paMvura, Bibury, uye Sudeley Castle.
Kusvika kuCotswolds Nechitima
Nzvimbo yeCotswolds yakakomberedzwa necornucopia yezviteshi zvechitima, kusanganisira Banbury, kugeza, Cheltenham, uye Morten-in-Marsh. Nzira yakanakisa yekusvika kuCotswolds kubva kuLondon kutora chitima kubva kuLondon Paddington chiteshi kuenda kuMorten-in-Marsh.. Kukwira kwechitima kwemaminetsi makumi mapfumbamwe kunokupa mubayiro mukare maonero yekumaruwa echiRungu.
Nguva inotevera paunozviwana wava kuda zororo rekuzorora, usapedze nguva yakawanda uchironga. pachinzvimbo, kwira muchitima kubva kune chero chiteshi cheLondon uye utizire kune imwe yeidzi nzvimbo dzemifananidzo muU.K.
Isu tiri Chengetedza Chitima achafara kukubatsira kuronga rwendo kuenda kuTop izvi 3 Yakanakisa Rwendo Kuenda Kubva kuLondon.
Unoda here kupinza yedu blog positi "Pamusoro 3 Yakanakisisa Chitima Rwendo Rwendo Kubva London” kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fbest-train-trip-destinations-london%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
BestTripDestinations	London	Train Travel	chitima rwendo	TrainTripLondon
A part-time traveler and explorer who loves to share her experience in her writing. I believe in expressing my views firmly and standing by my actions - Unogona baya pano Bata Rebecca
Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba UK, Mazano Ekufamba